के हुन् सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रिय पार्कहरू युरोप मा | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
(पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको: 12/11/2021)
तपाईं ठूलो बाहिर एक प्रेमी हो? हामी जंगल कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, पोखरी, वनस्पति, र जीव जन्तु. पैदल यात्रा, साइकल, र सामान्य ताजा हावा भलाई. त्यसपछि पत्ता लगाउन पनि युरोप सबैभन्दा सुन्दर पार्कमा, र रेल द्वारा त्यहाँ कसरी.
प्राकृतिक भ्रमण हुनत आकर्षण जस्तै वन एक मा जटिल हुन सक्छ रेल यात्रा, भनी निकाल्न कुनै कारण छ. यी प्राकृतिक आकर्षण व्यस्त गर्न सही विपरीत प्रस्ताव शहरहरू, र मात्र अनुसन्धान को एक बिट संग, तपाइँ पाउनुहुनेछ कि उनीहरु आश्चर्यजनक रूप मा सुविधाजनक एक ट्रेन बचाउन को लागी पुग्न को लागी सुविधाजनक छन्.
यस लेखमा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको थियो र द्वारा गरिएको थियो एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्, सस्ता ट्रेन टिकट वेबसाइट विश्व मा.
यसको भ्रामक नाम बाबजुद, Saxon स्विट्जरल्याण्ड राष्ट्रिय निकुञ्ज मा धेरै छ जर्मनी. यो एक विशाल प्राकृतिक क्षेत्र हो कि उत्तर पश्चिमी चेक गणतन्त्र को सीमाहरु. यो देशको मात्र रक राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, तर यो पनि उल्लेखनीय वन समेटिएका गर्नुपर्छ. धेरै टाउको पैदल यात्रा को लागी क्षेत्र को लागी, तर त्यहाँ पनि छ एक आकर्षक इतिहास अन्वेषण गर्न, को Konigstein किल्ला सहित.
तपाईं जर्मनी हुनुहुन्छ गर्दा, हामी तपाईंलाई पनि भ्रमण सुझाव कालो वन. सायद मध्य युरोप सबैभन्दा प्रसिद्ध जंगल, यो सम्झना गर्न छ. दक्षिण पश्चिम जर्मनी मा यो आश्चर्यजनक पहाडी क्षेत्र यो सबै छ - घना सदाबहार वन, नाटकीय पहाड, र विचित्र गाउँ. यो cuckoo घडीहरु गर्न घर 1700s फिर्ता डेटिङ छ, र धेरै गाउँहरु टाढाको समयमा अत्यन्तै अडकिएको महसुस गर्नुहोस्. द परी-कथा वातावरण वास्तविक संसारमा पूर्ण escapism गर्न पूर्ण नै बढाउँछ, यदि भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ के!
एक सबै भन्दा राम्रो अनुभव काला वन रेल द्वारा छ. काला वन लाइन Offenburg र Konstanz बीच चल्छ. यसले क्षेत्रको अविश्वसनीय दृश्यहरू प्रदान गर्दछ र धेरै शहरहरूमा रोकिन्छ बाटो साथ.
Hallerbos वन, वा "नीलो वन", एक आश्चर्यजनक वन लामो लागि पूर्ण छ सुंदर hikes. Bluebells को विशाल कालीन मा पप अप मध्य-अप्रिल प्रत्येक वर्ष सुन्दर वन यसको नाम दिनुहोस्. भूमि एक कायाकल्प अनुभव यो सुन्दर खण्डका एक यात्रा गर्ने विशाल Sequoia रूखहरू पनि छन्.
को bluebells फसाउन Hallerbos भ्रमण गर्न उत्तम समय हरेक वर्ष फरक छ र मौसम निर्भर नोट. यो ढिलो तापमान rises, यस ढिलो फूल फक्रिएको. अब जाने ठूलो समय हुनेछ, किनकि यो यस बर्षको मध्य अप्रिल भन्दा अलि ढिलो तातो भएको जस्तो देखिन्छ. तर यो रूपमा समय विरुद्ध दौड छ न्यानो मौसम पनि रूखहरू फिर्ता आफ्नो पात प्राप्त अर्थ, सूर्यका को bluebells depriving, जो तिनीहरूलाई grayish बारी बनाउँछ. को लागि कुनै राम्रो आफ्नो इन्स्टाग्राम pics!
HARDANGERVIDDA राष्ट्रिय निकुञ्ज, NORWAY
एक पटक तपाईं ओस्लो हुनुहुन्छ, तपाईंलाई चाहिन्छ रेल द्वारा Hardangervidda प्राप्त गर्न तपाईं टेलिमार्क मा बो गर्न ओस्लो देखि रेल लाग्न सक्छ. त्यहाँ तपाईंले पकड गर्न सक्छन् “Haukeliekspressen” Rauland गर्न. तपाईं पनि Hardangervidda अन्वेषण लागि ठूलो सुरूवात अंक हो कि स्थानहरूको संख्या गर्न ओस्लो देखि बर्गन रेलवे लाग्न सक्छ - Myrdal गर्न Flam, फिनिस, Haugastol, Ustaoset, र Geilo.
बर्गन देखि Hardangervidda गर्न रेल द्वारा, बर्गन रेलवे स्थानहरु कि Hardangervidda - Myrdal को अन्वेषण को लागी महान शुरुवात बिन्दुहरु को एक संख्या मा रोकिन्छ।, फिनिस, Haugastol, Ustaoset, र Geilo. तपाईं पनि Eidfjord गर्न Voss देखि Voss गर्न रेल र बस लाग्न सक्छ.
आफ्नो बाल्टिन सूचीमा युरोप मा सबै भन्दा राम्रो राष्ट्रिय पार्कहरू केही थप्न तयार? गरौं एक ट्रेन बचत गर्नुहोस् तपाईं चाँडै त्यहाँ प्राप्त गर्न मद्दत, र बिना थपियो, लागत लुकेका.
के तपाइँ तपाइँको साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnational-parks-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#Europeparks	#Nationalparks	#Nationalparkseurope	युरोप यात्रा	लामो रेल यात्रा	रेल यात्रा	ट्राभेलबिजियम	यात्री जर्मन	travelnorway	यात्रा टिप्स